भिडियो Archives - Nagarik Sandesh
Home / भिडियो
सलिन र मलिकाबीच डिप लभ
3 days ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on सलिन र मलिकाबीच डिप लभ
काठमाडौं । चलचित्र ‘यात्रा’ को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक भएको छ । गत शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म प्रदर्शनको एक हप्ता पूरा हुँदै गर्दा सार्वजनिक भएको ‘फ्लाइङ्ग’ बोलको गीतमा अभिनेता सलिनमान बनियाँ र डेब्यू गर्ल मलिका महतलाई डिप लभमा देखिएको छ । उनीहरु पोखराको रमणीय स्थानहरुमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । गीतमा सुगम …
गौरव शिक्षक र अनु पत्रकार बनेपछि
4 days ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on गौरव शिक्षक र अनु पत्रकार बनेपछि
काठमाडौं । आरबि खत्री ‘शरद’ ले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘पसिना’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यही बैशाख २७ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको मजदुरहरुको कथाव्यथामा निर्मित फिल्मको बुधवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरमा मजदुरहरुले भोग्नु परेको समस्यालाई देखाउन खोजिरहेको छ ।फिल्मको सार्वजनिक ट्रेलरमा अभिनेता गौरव पहारी शिक्षक …
पल र वर्षाबीच यस्तो बन्यो वाचा (भिडियोसहित)
5 days ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on पल र वर्षाबीच यस्तो बन्यो वाचा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चलचित्र ‘वीरविक्रम २’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । जेठ ३ मा आउने मिलन चाम्स निर्देशित फिल्ममा समावेश ‘पिरतीको मिठो तिर्सना….’ बोलको रिमेक गीतले सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्दै गर्दा निर्माण टिमले ‘वाचा’ बोलको गीत नयाँ वर्षको उपहार स्वरुप सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा फिल्मका लिड अभिनेता पल शाह …
गीतबाट टिजर सार्वजनिक, कस्तो होला ‘सानो मन’ ?
1 week ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on गीतबाट टिजर सार्वजनिक, कस्तो होला ‘सानो मन’ ?
काठमाडौं । पहिलो पटक हाल धमाधम छायांकन भइरहेको फिल्म ‘सानो मन’ मा समावेश ‘रानु कम्मर…’ बोलको पार्टी गीतको टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीतमा फिल्मका लिड अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी र अभिनेत्री शिल्पा मास्के फिचर्ड छन् । गीतको भिडियोलाई बलिउडका कोरियोग्राफर साजन सिंहले निर्देशन गरेका छन् । उनी बलिउड …
आयो ‘कालो वर्ष’को टिजर (भिडियोसहित)
1 week ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on आयो ‘कालो वर्ष’को टिजर (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चलचित्र ‘कालो वर्ष’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । आगामी बैशाख १३ गते प्रर्दशनमा आउने उक्त चलचित्रको टिजर मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो । चलचित्रमा दैविक प्रकोपको कारण भोग्नु पर्दाको समस्याहरुलाई उजागर गरिएको कलाकार पवन भट्टराईले जानकारी दिए । लक्षु गौतमले निर्देशन गरेको चलचित्रमा ओकेश पनेरु, अनुपा …
हलमा नलागी युट्युबमाः हेर्नुस् पूरै चलचित्र ‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’
2 weeks ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on हलमा नलागी युट्युबमाः हेर्नुस् पूरै चलचित्र ‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’
काठमाडौं । चलचित्र ‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’ चलचित्र हलमा नलागी सीधै युट्युवमा रिलिज भएको छ । नेपालमा वितरक तथा हलवालासँग बारम्बार ताकेता गर्न नसकेका कारण फिल्म सिधै युट्युबमा रिलिज गरिएको निर्देशक तथा निर्माता ईश्वर थापाले जानकारी दिएका छन् । यो फिल्मको अमेरिका र क्यानाडामा विशेष शो गरिएको थियो । …
‘कालो बर्ष’ वैशाख १३ मा, यस्तो छ ‘यस्तो साथी….’
3 weeks ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on ‘कालो बर्ष’ वैशाख १३ मा, यस्तो छ ‘यस्तो साथी….’
काठमाडौं। चलचित्र ‘कालो वर्ष’ यही वैशाख १३ गते रिलिज हुँदैछ । यो नेपाली गरिब घरको कथा हो । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछिको कथा हो । यही फिल्मको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रको निर्माण पक्षले ‘यस्तो साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो। गीतमा अन्जु पन्त र विशाल निरौलाले स्वर …
यस्तो आयो अनमोल स्टारर ‘ए मेरो हजुर ३’ को ट्रेलर
3 weeks ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on यस्तो आयो अनमोल स्टारर ‘ए मेरो हजुर ३’ को ट्रेलर
काठमाडौं । ‘ए मेरो हजुर ३’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । चैत २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको झरना थापा निर्देशित फिल्मको बुधवार साँझ नै निर्देशक थापाको जन्मदिनको अवसरमा पत्रकारलाई ट्रेलर देखाइएको थियो । अभिनेता अनमोल केसीलाई भने डबल रोलमा देख्न सकिन्छ । उनी सुपरस्टार गायक प्रेम र एक …
नाजिरले संगै जान खोज्दै शिल्पालाई सोधे –तिमी जाने बाटो कता ?
March 19, 2019	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on नाजिरले संगै जान खोज्दै शिल्पालाई सोधे –तिमी जाने बाटो कता ?
काठमाडौं । चलचित्र ‘कागजपत्र’ को ‘स्याड भर्सन’ गीत सार्वजनिक भएको छ । मंगलवार राजधानीमा सञ्चारकर्मीहरुसँग होलीको रंग एकआपसमा दलेर निर्माण टिमले गीत सार्वजनिक गरेको हो । ‘तिमी जाने बाटो कता’ बोलको गीतमा फिल्मका चार प्रमुख कलाकारहरु नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के, भोलाराज सापकोटा र सरिता गिरीलाई पीडामा देखाइएको छ । प्रविशा …
प्रदीपको आँगनीमा जसिताको कमाल [भिडियोसहित]
March 18, 2019	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on प्रदीपको आँगनीमा जसिताको कमाल [भिडियोसहित]
काठमाडौं । चलचित्र ‘लभ स्टेशन’ को दोस्रो गीत युट्युब रिलिज भएको छ । ‘घाम जून’ बोलको गीतले सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्दै गर्दा निर्माण टिमले सोमवार अर्को रोमान्टिक गीत ‘मेरो आँगनीमा’ सार्वजनिक गरेको हो । सुरेश लामाको स्वर रहेको गीतमा अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङ फिचर्ड छन् । फिल्मका निर्देशक …
© Copyright 2019, Mizzle Pictures Production, Kapurdhara Kathmandu | All Rights Reserved